“Wuxuu u ciyaaraa Chelsea ee uma ciyaaro kooxaha Southampton ama Brighton” – Zola oo eedayn kulul u jeediyay Álvaro Morata – Gool FM
“Wuxuu u ciyaaraa Chelsea ee uma ciyaaro kooxaha Southampton ama Brighton” – Zola oo eedayn kulul u jeediyay Álvaro Morata
Dajiye January 5, 2019
(Chelsea) 05 Jan 2019. Halyayga reer Talyaani ahna laacibkii hore kooxda Chelsea, sidoo kalena ah caawiyaha Maurizio Sarri ee Gianfranco Zola ayaa si weyn u eedeeyay weeraryahanka reer Spain Alvaro Morata.
Alvaro Morata ayaa dhawaanahanba shaki la galinayay mustaqbalkiisa kooxda Chelsea, kadib hoos u dhac ku yimid qaab ciyaareedkiisa.
Gianfranco Zola ayaa sheegay inaysan ku habooneen weeraryahan dhan ee u ciyaara mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaarada yurub inuu dhaliyo 5 gool, taasoo shaki sii galineysa inuu baaqi ku sii ahaado garoonka Stamford Bridge ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan.
“Dadka waxay ka rajeenayaan wax badan weeraryahanka ku sugan kooxda Chelsea, waxay doonayaan goolal badan iyo dalabyo gaar ah, taasina waa caadi”.
“Waa inaad wax ka barataa dhamaan culeysyada gadaashaada ah, sababtoo ah culeysyada ayaa kaa soo hor jeesan doono hadii aad ku dhex qaadato gudaha garoonka”.
“Wuxuu u ciyaaraa kooxda Chelsea ee uma ciyaaro kooxaha Southampton am Brighton, anigoo ixtiraam buuxa u haya labadan kooxood”.
Louis van Gaal oo sheegay kooxda xili ciyaareedkan ku guuleysan doonto horyaalka Premier League
Manchester United oo u Gudubtay wareega Afaraad ee FA Cup Kaddib markii…+SAWIRRO